Solar Skywalks Ike N'ọrụ Nke Na-Agbatị Ụkwụ - Imewe Mmewe
Ike N'ọrụ Nke Na-Agbatị Ụkwụ
Ike N'ọrụ Nke Na-Agbatị Ụkwụ Obodo ukwu nke ụwa - dị ka Beijing - nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ụkwụ ụkwụ na-agabiga akwara okporo ụzọ. Ha anaghị enwekarị mmasị, na-agbada echiche obodo n'ozuzu ya. Echiche nke ndị na-emepụta ime ka azọ ụkwụ na-agagharị agagharị, ike na-ewepụta modulu PV ma gbanwee ha ka ọ bụrụ mma obodo abụghị naanị ihe ga-adịgide adịgide kama ọ na -emepụta ụdị esemokwu na-aghọ ihe na-adọrọ adọrọ na mbara ihu obodo. Ebe ụgbọ oloko E-ma ọ bụ E-igwe kwụ otu ebe n'okpuru mgbada n'okpuru jiri ike anyanwụ rụọ ọrụ ozugbo.
Aha oru ngo : Solar Skywalks, Aha ndị na-emepụta ya : Peter Kuczia, Aha onye ahịa : Avancis GmbH.
Ike N'ọrụ Nke Na-Agbatị Ụkwụ Peter Kuczia Solar Skywalks